Xiriirka Dowladaha Mareykanka iyo Ruushka oo sii xumaanaya – Balcad.com Teyteyleey
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ku amray 755 shaqaale inay ka tagaan howlgalka diblomaasiyadeed ee Mareykanka, tan oo uu Ruushku uga aargudanayo cunaqabateynta cusub ee Mareykanku uu saaray xukuumadda Moscow.
Go`aanka lagu cayrinayo shaqaalaha ayaa la sooo saaray Jimcihii, balse madaxweyne Putin ayaa haatan xaqiijiyay tirada shaqaalaha laga doonayo inay iska tagaan wixii loo gaaro 1-da bisha September.
Tirada shaqaalaha ayaa lagu soo koobi doonaa 455, oo la mid ah tirada Ruushka ka joogta Washington.
Tallaabadan ayaa loo maleynayaa inay tahay cayrinta diblomaasiyiintii ugu badnaa ee abid dal laga soo cayriyo sida taariikhda lagu hayo.
Tiradan waxaa ku jira shaqaale u dhashay Ruushka oo ka shaqeynayay howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee gudaha Ruushka.
Ruushka ayaa sidoo kale sheegay inuu la wareegayo guryo xilliyada fasaxa la yimaado iyo bakhaarro ay isticmaalaan diblomaasiyiinta Mareykanka.
Bishii December, maamulkii Obama ayaa amray la wareegidda laba xarumo diblomaasiyadeed oo Ruushku lahaa wuxuuna cayriyay 35 diblomaasiyiin Ruushka u dhashay, isagoo ku eedeeyay Ruushka inuu farageliyay Xisbiga Dimuqraadiga ah iyo ololihii Clinton.
Cunaqabateynta cusub ee Mareykanku uu Ruushka saaray ayaa waxaa si xooggan u ansixiyay labada aqal, inkastoo Aqalka Cad uu ka soo horjeestay.
Hay`adaha sirdoonka Mareykanka ayaa aaminsan in Ruushku uu farageliyay doorashadii madaxtinnimo ee Mareykanka isagoo la saftay madaxweyne Donald Trump, waxaana haatan socda dhowr baaritaan oo arrintaasi la xiriira.
Ruushka ayaase mar walba dafirayay inuu wax lug ah ku lahaa doorashadaasi, madaxweyne Trump ayaa isagana ku adkeysanaya in wax xiriir ah uusan jirin.
The post Xiriirka Dowladaha Mareykanka iyo Ruushka oo sii xumaanaya appeared first on Ilwareed Online.